HP ကအမှား "BOOT ကို DEVICE ကိုတွေ့သည်မ" - WINDOWS ကို - 2019
မှားယွင်းနေသည်အဆိုပါ HP ကလက်တော့ပ်ပေါ်တွင် "Boot ကို Device ကိုတွေ့သည်မ"
လက်ဖြင့် flowcharts နှင့်ကားချပ် Create လွယ်ကူသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ ဒါဟာအထူးအစီအစဉ်များများ၏အကူအညီဖြင့်ထိုအတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။ သူတို့ကယခုအလုံအလောက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Visio - ကားချပ်များနှင့်ဇယားကိုဖန်တီးရန်ခေတ်မီအားနည်းချက်ကိုအယ်ဒီတာ။ နေ့စဉ်ရှုပ်ထွေးဆားကစ်များနှင့်သာမန်အသုံးပြုသူများအဖန်တီးသောသူနှစ်ဦးစလုံးပညာရှင်များ၎င်း၏ဘက်စုံကြောင့်။ ငါတူရိယာ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်အဆိုတင်သွင်း။
program ကိုအထူးအာရုံစူးစိုက်မှုအသစ်တခုစာရွက်စာတမ်းကိုဖန်တီးပါ။ ဒါကနည်းလမ်းများစွာ၌ပြစ်မှားမိသည်:
1. သင်ကအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူကိုက်ညီတဲ့ template ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
2. Template ကိုအမျိုးအစားကိုသုံးပါ။
3. သင်ကလိုအပ်သော site ကိုရှာတှေ့နိုငျ « Ofice.com »။ အဲဒီမှာသူတို့မှာလည်းအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ ရှာဖွေရေးသုံးပါနှင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံကိုရှာဖွေဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
4. Microsoft က Visio program ကိုအခြားစာသားအယ်ဒီတာများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဒါဇယားများနှင့်ကားချပ်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများမှရှေးခယျြထားနိုင်ပါတယ်။
5. နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သည်နမူနာနောက်ပိုင်းတွင် created ဖြစ်ကြောင်း tools တွေကိုအစုတခုမရှိဘဲလုံးဝအချည်းနှီးသောစာရွက်စာတမ်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးသားပိုပြီးသို့မဟုတ် program နဲ့ဒီထက်အကျွမ်းတဝင်နေသောအသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်နည်းလမ်း။ ရိုးရှင်း circuits များနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ပိုကောင်းအသစ်ရောက်ရှိလာသော။
ကိန်းဂဏန်းများဆို circuit ကို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ ဤ Workspace အတွက်ဆွဲအားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
မောက်၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူသော။ တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက် panel က၏အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျ၎င်းငျး၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲဥပမာ, ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသည် panel ကို Microsoft က Excel ကိုနဲ့ Word ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။
အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်, တကလက်စွဲသို့မဟုတ်အလိုအလျောက် mode မှာပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
tools တွေ၏အထူးအစုများ၏အကူအညီဖြင့်, သင်ကိန်းဂဏန်း၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ align, အရောင်နှင့်လေဖြတ်ခြင်းပြောင်းပေးပါ။ ဒါဟာအစထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စာသားနှင့်၎င်း၏အသွင်အပြင် edited ။
အဆိုပါ Microsoft က Visio အစီအစဉ်စံ္ထုအပြင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်နှင့်အခြား: ရေးဆွဲ, ကားချပ်, ဇယား, etc ထိုသူတို့အဘို့, သင်ကပူဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် Tooltip စေနိုင်သည်။
Display ရဲ့ Options ကို
ယင်း၏စာရွက်, ထိုအရာဝတ္ထုသူတို့ကိုယ်သူတို့၏အရောင်အစီအစဉ်ပြသအသုံးပြုသူအဆင်ပြေဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်မူတည်ပြီးအဘို့, နောက်ခံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သို့တိုင်သူကကွဲပြားခြားနားသော frames များကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအလွန်အသုံးအင်္ဂါရပ်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူဆက်စပ်နိုင်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုများ၏အစီအစဉ်များဖို့ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြင်ပအရင်းအမြစ်စာရွက်စာတမ်းများ, ရေးဆွဲသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီ (ထိုကားချပ်၏ရှင်းပြချက်) မှဖြစ်နိုင်သည်။
analysis created schema
တစ်ဦးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန် built-in tools များ၏အကူအညီဖြင့်အားလုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာဘို့ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ feature စာသားအမှားအယွင်းများများအတွက် check လုပ်ထားသောအတူ tools တွေကိုအစုတခုပေးပါသည်။ လိုအပ်သောလျှင်, သင်, Built-in ကိုကိုးကားစာအုပ်များကိုအသုံးပြုဖို့ဘာသာပြန်များသို့မဟုတ်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စာမျက်နှာ Setup ကို
created နဲ့အလွယ်တကူပြောင်းလဲသွားစာရွက်စာတမ်းများ၏ display ။ သင့်အနေဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုချိုးလုပ်ဖို့စကေး, display ကိုပြတင်းပေါက်များနှင့်အခြားအဆင်ပြေထုံးစံညှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်မအပြုသဘောစှဲကျန်ကြွင်းစေပြီ။ တခြား Microsoft အယ်ဒီတာများမှအလားတူအချို့သောအတိုင်းအတာအထိကုန်ပစ္စည်းဒီတော့အလုပ်မအထူးအခက်အခဲအရေးမထားဘူး။
တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ interface ကို;
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Visio တစ်ဦးစမ်းသပ်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Microsoft က Office ကိုထုတ်ဝေသူ Group သည်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပုံရိပ်ဖိုင်များကို Microsoft Word ကိုစ လျှပ်စစ်ဆားကစ်ဆွဲဘို့အစီအစဉ်ကို ပျံ Logic
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Visio - မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှရုံး suite ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် full-featured vector ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာ, ။
ကုန်ကျစရိတ်: $ 54